Mac Camera Ma Shaqeyso Khalad - Dayactir Suurtagal ah - Og
Mac Camera Ma Shaqeyso Khalad - Dayactir Suurtagal ah
Kaamirada Mac ee aan shaqeynaynin waa arin inta badan la arko dhibaatooyinka qaar awgood. MacBook iyo iMac waa mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee kombuyuutarrada ay soo saarto shirkadda Apple. Xallinta arrinta websaydhka waxay u baahan tahay in la fahmo halka dhibaatadu ka timaaddo kombuyuutarka. Waa muhiim in la hubiyo inaan si dhakhso leh u xallin karno dhibaatadan. Tilmaamahan, waxaan ku eegi doonnaa arrimaha suurtagalka ah iyo inaan qalabka ku soo celino wadada saxda ah. Sannadka 2020 wicitaannada fiidiyowgu waxay noqonayaan qayb maalinle ah oo nolosheena ah. Waxaan u baahanahay inaan yeelano kombuyuutar shaqeynaya, kaas oo noo sahlaya inaan yeelano xiriir fudud.
Maxay Kameradaada Mac-du u shaqeynayaan?
Hadda oo aan u adeegsanayno kamaradahayaga wax badan shaqadeena guriga, way dhib badan tahay haddii Mackeennu ku guuldareysto inuu keeno. Haddii dhibaatadu aysan ahayn cillad farsamo oo daran, waxaad ka filan kartaa natiijooyin dhakhso leh hageyaga hagaajinta kamaradda mak. Kuwani waxay ku dhici karaan dhibaatooyinka software-ka awgood. Arimahan mac-da ahi waa wax si fudud loogu hagaajin karo xoogaa wax-ka-beddelid ah. Dhaawaca jirka ee kamaraddaada ayaa dhici kara sababo badan awgood. Waxay kaaga baahan kartaa inaad booqasho ugu tagto xarumaha daryeelka Apple. Tilmaamahan, waxaan si weyn diirada u saari doonaa sababaha software.
Marka kamarada aan laga helin MacBook, ogeysiiska 'Ma jiro kamarad kuxiran' ayaa soo muuqan doonta. Waxaa jiri kara sababo kala duwan oo loogu talagalay kamaradda mak, aan shaqeynin, oo dhammaantoodna ma ahan cillad xagga qalabka ah.Waxay noqon kartaa wax kasta oo ku wajahan barnaamijyada softiweer, laga bilaabo isku xirka internetka illaa iyo infekshanka furin-wax kastoo dacwadu tahay, had iyo jeer waxaa jira xal ku saleysan barnaamijyada.
Ma dooneysaa inaad iibsato Airpods? Hubi Apple AirPods Pro vs AirPods 2 Isbarbar dhig.
Ciladaha Suura galka ah ee Kamaradda MAC ee aan Khalad Shaqaynayn:
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah xalalka caadiga ah ee adeegsadayaashu ay codsan karaan si ay u helaan kaameradooda shaqeysa oo socota:
1. Dib u bilaw Mac-gaaga
Waxaa jiri kara fursad ah in barnaamijyada kale ay isticmaalayaan kaamirada asalka.Marka dib u bilaabida aaladda waxay dili kartaa dhamaan howlaha asalka.
Si aad dib ugu bilowdo qalabka-
Isticmaalayaashu waa inay gujiyaan Icon-ka Apple ee ku yaal qaybta kore ee qalabkaaga.
Waa inaad doorataa badhanka dib u bilaabida.
Dib-u-bilaabid fudud ayaa si dhakhso leh u hubin karta in kamaraddu ay shaqeyso. Waxay umuuqataa inay lama huraan yihiin, laakiin dadka isticmaala kumbuyuutarradooda oo shaqeynaya maalinta oo dhan way fahmi karaan.
Hubi barnaamijyada adiga oo isticmaalaya kamaradda isku mar:
Hal barnaamij oo keliya ayaa kaamiradda ka faa’iideysan kara hal mar oo ka mid ah waqtiga. Marka si loo hubiyo in barnaamijyada asalka ah ay isticmaalayaan kamaradda-
Ka bilow Arjiga Kormeerka Waxqabadka.
Jooji dhammaan barnaamijyada kale ee furan iyo korantada adoo adeegsanaya barnaamijka (sida Skype, FaceTime, iwm.)
Kaydinta shaqada iyo xidhitaanka dhammaan barnaamijyada waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan haddii adeegsadayaashu aysan hubin barnaamijka gaarka ah ee isticmaalaya kamaradda.
Kamarad loo isticmaalo muddo dheer ayaa sababi karta arrimo qaarkood. Apple sidoo kale waxay sheegaysaa inay ku habboon tahay in la joojiyo dhammaan barnaamijyada kamaradaha shaqeeya sida Skype, Zoom, Google meet, iyo Facetime.
U isticmaal Xoog Jooji kamarad aan ka shaqeynaynin Mac:
Dib-u-bilaabiddu waxay qaadataa waqti waxayna carqaladeyn kartaa nidaamka shaqada. Markaa Khadka Tooska ah ee degdegga ah ee lagu qasbayo joojinta hawsha ayaa caawin kara-
Tag barta toosh raadinta oo ku qor 'Terminal' oo fur.
Hada qorsudo killall VDCAssistant.
Ku dhufo kumbuyuutarka oo geli lambarka sirta ah haddii laguu diro.
Dib u cusbooneysii barnaamijka si aad u hubiso xaaladda. Way waxtar leedahay markii aad dhibaatada soo food saartay muddo dheer.
Dib u deji mashiinka nidaamkaaga Mac:
Haddii kamaradda ku taal Mac aysan wali shaqeynin oo wax ka mid ah kor ku xusan aysan u muuqan inay caawinayaan, markaa dib u dejin adag ee qalabkaaga koontaroolayaasha ayaa ku imaan kara waxtar.SMC waxay maamushaa shaqooyin badan oo qalabka kombuyuutarka ah oo ku saabsan Mac, dib u habeyntiisana waxay u adeegi kartaa xalka dhibaatada.Si dib loogu dhigo SMC-ga MacBook (2017 iyo wixii ka horreeyay).
Isticmaalayaasha waxay ku dhejin karaan adabtarada xoogga.
Ku hay Shift + Xakamaynta + Furaha xulashooyinka iyo badhanka awoodda isku mar.
U oggolow 30 ilbidhiqsi inay dhaafto kahor intaadan fureyaasha furin. Waxaa kabaha doonaa ilaa Mac.
Si dib loogu dhigo SMC-da MacBooks-kii dhowaa (wuxuu u shaqeeyaa AIR iyo Pro)
Isticmaalayaasha waa inay hoos u dhigaan badhanka awoodda qalabkaaga Mac muddo toban ilbiriqsi ah.
Sii daa batoonka korontada oo waxyar sug.
Mar kale shid Mac-da.
Haddii arrintu sii socoto, iskuday tallaabada hoose -
Riix oo hayso furaha Shift midig, furaha Xulashada bidix, iyo badhanka Xakamaynta bidix ilaa toddobo ilbiriqsi.
Waa inaad hoos u dhigtaa badhanka awoodda xoogaa ilbiriqsiyo dheeraad ah.
Sii daa dhammaantood oo sug kombuyuutarkaaga dib u dajinta.
Waxay kaa caawin kartaa dib u dajinta wadayaasha mac. Waa faa'iido in la xalliyo wixii arrimaha maaraynta khayraadka gudaha ah ee qalabku wajahayo.
Tayaynta Waxqabadka Nidaamka Guud:
Qalabka Mac wuu kaydin karaa oo abuuri karaa faylal badan oo ku meel gaar ah oo laga yaabo inuu hoos u dhigo. Kameradda websaydhka ah ee 'Mac' ma shaqeyn karto xaaladdan oo kale. Kuwani waa faylal ku meel gaadh ah oo lagama maarmaan u ah hawlgalka wakhti kasta laakiin hawlla'aan ka dib markay dhammaystiraan hawsha (yada).
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho barnaamijyada sida CleanMyMac X si aad u sameyso nadaafad joogto ah oo nidaamsan isla markaana aad u hagaajiso Mac si toos ah.Barnaamijku wuxuu ka caawiyaa nadiifinta dhammaan faylasha iyo barnaamijyada aan la isticmaalin, keydka barnaamijka aan kala sooca lahayn, wuxuuna ka caawiyaa dadka isticmaala inay ka ilaashadaan Mac-kooda hanjabaadaha iyo Malware-ga, iyaga oo dhex-dhexaad ka noqonaya ilbidhiqsiyo gudahood. Waxa kale oo ay ka caawisaa wadista nadiifinta ee ay ku lifaaqan yihiin emayllada iyo buskudyada iyo dhammaan walxaha kale ee aan loo baahnayn si ay ugu suurtagasho khibrad la filaayo qofka isticmaala dhammaadka
Ugu dambeyntiina, isku xirka internetka iyo xawaarahaagu waa inuu ku filnaadaa (ugu yaraan 128 kbps, ama 1 Mbps oo loogu talagalay wicitaannada fiidiyowga ee 'HD FaceTime').Isku day WiFi Explorer, falanqeeye shabakadeed kaas oo gacan ka geysta aqoonsiga iyo xallinta arrimaha guud ee shabakadda.Waxay baareysaa jawiga shabakada (kala duwanaanta band, tayada calaamadaha, xaalada amniga), waxay cadeysaa isku dhacyada kanaalka iyo arrimaha la xiriira, waxayna siisaa talooyin deg deg ah oo lagu hagaajinayo WiFi.
Kawaran hadaan waxba shaqeyn?
Ugu dambeyntiina, haddii uusan midkoodna wax ka beddelin barnaamijyada wax-ku-oolka ah, isticmaaluhu waa inuu helaa Dukaanka Apple ama farsamo yaqaan Apple u idman si uu u eego kamaraddaada la dejiyay. Fursadaha arrimaha qalabka jira ayaa jira. Xaaladdan oo kale, midkoodna, sidaan hore u soo sheegnay, isbeddellada ayaa shaqeyn doona. Jabsashadaan degdega ah waxaa shaqeyn kara oo keliya markii aad la kulanto dhibaatooyin xagga software-ka ah.
Tilmaamahan, waxaan isku dayeynaa inaan xallino dhibaatooyinka kamaradda mac, ma shaqeyneyno. Guud ahaan arintu waxay umuuqataa wax iska fudud. Xalku waa toos. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeenu kaa caawinayo inaad isla markiiba ku soo noqoto dugsigaaga, kulleejada, ama kulanka shaqada.
Soo Degso VLC Media Player oo loogu talagalay Mac
Sida loo dayactir iPhone Lugood xiriiri karin iTunes?
TamilRockers (2020) - Website-kani Cusub Ma Ammaanbaa in La Adeegsado?
xiriiriyeyaasha filimada buuxa ee youtube
filimaan bilaash ah khadka tooska ah fayras malaha
websites movie lacag la'aan ah filimada cusub
barnaamijyada google chromecast ee loogu talagalay pc
doorasho kale oo aan ahayn cable tv
goobta si aad u daawato filimaan cusub oo bilaash ah
xbox one dahab dhaliyaha lambarka xubinnimada